Qabiyyee LibreOffice keessaa Eeguu
Kan kanaan gadii ilaalcha gubbaa toftaa addaa addaa qabeentoota kan LibreOffice keessaa akka hin jijjiiramne, hin haqamne ykn ilaalamne eeganidha.
Galmeewwan hundaa yoo olkaa'aman eeguu
Galmeewwan hundi Dhangii OpenDokumentiidhaan olkaa'aman ittigaan olkaa'amuu ni danda'u. Galmeewwan ittigaan olkaa'aman ittigaa malee banamuu hin danda'an. Qabiyyichi hayyisameera akka gulaalaa alaantoon akka hin dubbifamneef. Kuni qabiyyeef, saxaatoo fi wantoota OLEf fayyada.
Faayilii - Akka Olkaa'i filiiti, Saanduqa filannoo Ittigaan wajjin olkaa'i mallattoo kaa'i. Galmee olkaa'i.
Galmee bani, iggita sirrii saagi. Faayilii - Akka Olkaa'ifilitti saanduqa filannoo Iggita wajji olkaa'i haqi.
Odeeffannoon Faayilii - Amaloota keessatti sagame hin icciteeffamne. Kun maqaa barreessaa, guyyaa kalaqaa, jecha fi arfii lakkaa'u qabata.
Irra-deebi'ama Mallattoo itti godhame Eeguu
Calc LibreOffice fi Writer LibreOffice keeessatti jijjiirama yeroo hunda hojjatameen, faaankshiniin keeddeebii eenyu akka jijjire kuusa. Faankishiniin kun hayyisa wajjin kafame, kanaaf yoo igginni sirri itti gale qofa dhaamuu danda.a. Hanga sanatti, jijjiiramonni hundi kuufamuu itti fufu. Jijjiramni fudhatamaa fi gatiinsaa hin danda'amu.
Goodayyota, Saxaatoo, fi wantoota OLE eeguu
Qabeentoo, qubannoo fi hamamtaa saxaatoo sagamee eeguu dandeessa. Goodayyota (barreessaa keessatti) fi wantoota OLE wanta falfakkaataatu irratti dalgama.
Fakkasa Wantoota fi Unka Wantoota Eeguu
Wantoota fakkasaa kan kamshaa Fakkasa waliin galmeewwanitti saagdu akkatasaa hammamtaa isaaniin siiqan ykn jijjiiraman ni eegamu. Wantoota unkaa kamshaa Too`annoowwan Unkaa saagaman waliin haala walfakkaatuun hojjedhu.
Cancala Dhangii - Wanta - Qubannoo fi hammamtaa- Qubannoo fi hammamtaa fili. Saanduqa filannoo Qabannoo ykn Hammamtaa mallatteessi.
Cancala Dhangii - Wanta - Qubannoo fi hammamtaa- Qubannoo fi hammamtaa fili. Saanduqa filannoo Qabannoo ykn Hammamtaa hin mallatteessin.
Qabeenta Kitaabessaa LibreOffice keessatti Eeguu
Man`eewwan Calc LibreOffice keessatti Eeguu
Title is: Qabiyyee %PRODUCTNAME keessaa Eeguu